Itiyoo-Ertiraa: Akeekkachiisa Dr. Abiyyii hanga geerarsa Haacaaluu Hundeessaatti - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, EBC Screenshot
Waanti tibbana Itoophiyaatti ta'aa jiru biyyarra darbee gurraafi qalbii addunyaa seeneera. Jijjiiramni siyaasaa waamicha dhaaba kamiifuu taasisuurra darbee hojiin mullisuu Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahimad taasisaa jiran haalaan mullateera.
Keessattuu dhimmoonni sadii, gurraafi qalbii uummataa keessa jiru. Guyyaa 100 Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad erga gara aangootti dhufanii hojjetan, Itoophiyaafi Ertiraan hariiroo tolfachuuf daawwannaa Pirezedaanti Isaayyaas Afawarqii Itoophiyaatti taasisaa jiraniifi ergaawwan aanga'oonni kun dabarsaa jiranidha.
Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad yeroo Pirezedaanti Isaayyaas Afawarqii daawwannaaf Itoophiyaa keessa jiran haasawaan taasisan akkuma yeroo kaanii jaalala, dhiifamaafi tokkoomuu sabaafi sab-lammoota biyyattiidha.
Dubbiin Ministirrri Muummichaa jaalalaafi tokkummaa dubbatan kun biyyarra darbee aanga'ootaafi lammileen Ertiraalleen hedduu kakaaseera. Miirriifi deebiin bakka hundarraa calaqqisaa jiru kanumas hima.
Haasawaa Pirezedaanti Isaayyaas Afawarqii yeroo turtii isaanii Itoophiyaa kanatti taasisan akka baayyonni kanaan dura seenaa isaa beekanitti ragaa ba'an kan adda ta'edha. Simannaa ho'aa Itoophiyaatti isaaniifi taasifameefi jijjiirama bulchiinsa Dr. Abiyyiin dhufaa jiru hanga jechaan ibsuu dadhabaniira akka ga'an miirri irraa mullatu ni agarsiisa.
'Amma waliin duulla, humni addaan nu baasu hin jiru.'
"Pirezedaantii Isaayyaas haasawaa afaan lammilee Itoophiyaa, Afaan Amaaraan, taasisaa yeroo jiranitti imimmaan qofatu isaan hafe. Ani Pirezedaanticha waggaa 40 irraa kaaseen nan beeka. Afaan Amaaraa dubbachuu isaa dhaga'ee hin beeku.
'Amma waliin duulla, humni addaan nu baasu hin jiru' yeroo inni jedhu warri isa dhaggeeffatan maqaan isa waamanii dhaadeffatan," jechuun fuula tiwiiterii isaaniirratti kan barreessan Keeniyaatti Ambaasaddarri Ertiraa Bayyanaa Ruusom turan.
Pirezedaant Isaayyaas, baroota darban keessaa gama aadaa keenyaafi bu'aawwan gadi fagoo seena qabeessaaf shira jibbinsaafi balleessaa afarfamaa ture mo'annee misooma, badhaadhinaafi tasgabbiif gama hundaan waliin hojjechuuf waliin kutannee gara fuula duraatti tarkaanfachuuf kaaneerra jedhan.
"Eenyumtuu jaalala keenyaafi walii galtee keenya akka diiguufi jeequu, waltumsuu keenya akka booressuufi miidhuu, misoomaafi guddina keenya akka gufachiisuufi qormaata keessa galchu hin eyyamnu!" jedhan.
Mnistirri Muummee Dr. Abiyyis haasawaa irra caalaa ergaa jaalalaafi tokkummaa dhiyeessan gidduutti warreen waamicha jaalala, nagaafi tokkummaa dhiyaachaaf jiru didanii nagaafi tasgabbii uuman akeekkachiisaniiru.
Hacaaluun akkuma dhaadate geerare
Waamicha nagaa buusuutti makamuu isa dhumaati kan jedhan Dr. Abiyy, Itoophiyaa keessatti ar'allee haala nama qaanessuun namoonni akka du'aa jiran kaasanii, "Maaloo gara naagaatti deebiyaa, kun waamicha nagaa isa dhumaa taasisudha" jedhaniiru.
Waltajjii Galma Barkumeetti waliigalteefi tokkummaa Itoophiyaafi Ertiraa gidduutti uumame labsuudhaaf qophaa'erratti Artistiin Haacaaluu Hundeessaa akkuma yeroo kaanii miiraafi onnee namaa geerarsaan labseera.
Ergaan geerarsa Haacaaluu hundee Galma Barukumee namoonni kuma digdamii shan keessatti argamanii daawwatan miira seenee hundeen raase.
Warri alaalarraa hordofaa jiranis ergaa yeroo isaa eeggate kan keessoo namaa jiru waltajjiitti abbaa ilaallatutti himuun isaa hedduu gammachiiseera.
Keessatti ajjeechaa lammee Bahaafi Kibba Bahaatti humnoota Poolisii Addaa Naannoo Somaaleetiin oromootarra guyyaa guyyaan ga'u geerarsaan miidhagsee himeera.
"Qamalee koo qamalittii
Yaa ishee boongoorra utaaltuu
Arbi cingiggiitti dhale
Akkamiin rafnee bullaa
Diinni ammas nu hin ciisne
Kunoo mi'eessoon galee
Rasaasaan nu waxale
Kunoo Cinaaksaniin galee
Kunoo Moyaaleen galee
Rasaasaan nu waxale!
Nurraa dhowwi yaa Lammaa
Nurraa dhowwi yaa Abiy
Yookaan qeerroottan iyyaa!"
Haacaaluun Afaan Oromoon geerarus humniifi jechoonni onnee dhugaafi xiiqqii keessaa inni baasu Afaan oromoo hin beekneef ergaa ni dabarsa. Seenaa dharaafi shiraa Oromoon biyya giida jedhamaa ture uummatichi akka qabatamaan dhara taasise geerare Haacaaluun.
"Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee,
Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara maleee"
Haacaaluun geerarsa isaa keessatti qabsoon ar'a irra ga'ame kun wareegama Qeerrootiin ta'uullee akki itti ibse hundaaf akka galutti.
"….dhiigi Qeerroo inni jige,
Biyya jigde kaasekaa…
Dhiigni Qeerroo hin jige Itoophiyaafi Ertiraa "Jedha geeraraan kun.
Viidiyoo, Warri simannaaf bahan maal jedhu?
Itiyoophiyaa fi Ertiraa: Pirezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaaf Finfinnee seenan
5 Muddee 2020
Raashiyaan Mooskootti talaallii Covid-19 kennuu eegalte